Arsene Wenger Oo Weli Ku Adkeysanaya In Robin Van Persie Uu Baaqi Ku Sii Ahaan Doono Arsenal. - jornalizem
Arsene Wenger ayaa ku celiyay mar kale inuu doonayo inuu Robin van Persie ku celiyo kooxda Arsenal xagaagan wax kasta oo ay ku qaadato.
Ciyaaryahankii qaaday gooldhalinta Premier League xilli ciyaareedkii hore ayaa hore u sheegay inuusan heshiiska u kordhin doonin kooxda iyadoo qandaraaskiisa ay uga harsan tahay kaliya 12 bilood.
Manchester City, Manchester United iyo Juventus ayaa dhamaantood qiimeynaya 29 jirkaan, lakiin Wenger oo la filayo inuu ku sharxo sababta Van Persie uu uga harayo kooxda Arsenal ee booqaneysa Asia inay tahay taam ahaanshihiisa, ayaa aaminsan inuu ku guuleysan doono in Van Persie uu baaqi ku sii ahaado waqooyiga London.
“Aniga ahaan, Van Persie waa mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka hadii uusan aheynba kan ugu fiican, waxaana ujeedkeyga uu yahay inaan ku sii celiyo kooxda” ayuu Wenger u sheegay website-ka Arsenal.
“Inta soo hartay waxaan sameyn doonaa waxa u fiican Arsenal Football Club. Waana xilligan halka aan joogno. Wax intaas ka badan oo la sheego ma jiraan”.
Arsenal ayaa qorsheyneysa inay qamaar ku gasho RVP iyagoo doonaya inay ceshtaan xagaagan, islamarkaana inta uu xilli ciyaareedka socda ka dhaadhiciyaan inuu heshiis cusub saxiixo, lakiin xagaaga soo socda RVP waxa u xor u ahaan doonaa inuu bilaash ku baxo.